Semalt Inotsanangura Maitiro eGoogle 'Imekudzikisa Imepi' Inoita Mazwi Ekutengesa Imirire
купить недорого вай фай роутер.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:35px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Email Markup inorondedzerwa sechinhu chakanaka-fungidzirwa yedhina inoita kutirumwe rudzi rwemaimiri rinoratidza zviri nani zviri nani. Kunyora kwakakodzera uye sangano rehuwandu hwemashoko e email zvichaveanokupa mukana wekutora deta yakawedzerwa uye kusvika kune vatengi muGoogle mapurogiramu akadai seKarimani kana Inbox.
Mumamiriro ekutengeserana e-commerce, izvi zvinoreva kuti kutumira nekusimbisaNyevero dzinogona kuwana zvakasiyana-siyana kubata mubhokisi re email, izvo zvinovandudza ruzivo rwevashandi. Jack Miller, nyanzvi ye Semalt Digital Services Inotsanangura zvinhu zvekushandisa email markups.
Email Markup for Confirmations Order
Pasi pane muenzaniso we Linking Data (JSON-LD) inotanga ne HTML scriptTsika ye "shanduro / ld-json" rudzi:
Nhanho inotevera inoratidza mamwe maviri makuru anogovana nhamba nehurongwaiyo inoshandura ruzivo rwakarongwa:
Kunyange pasina ruzivo rweJSON, inofanira kunge iri nyore kunzwisisa ichomumwe munhu atenga "chimwe chigadzirwa chakasiyana" kubva ku "SomeDistributor.com" ye $ 60.
Zvinhu zvinotevera zvinoda kuti Email Markup iite basa rekugadza:
Nhamba yekurayira - inoratidza kuiswa kwevatengesi
PriceCurrency - inoshandisa ISO 4217 mavara-tsamba matatu
Merchant - ndiro zita resangano kana munhu
Chipo chinogamuchirwa - chinosanganisira mutengo, chikwata, chikamu uye zvakawanda zvechechina chakatengwa
Email Markup inewo zvakasiyana-siyana zvakakurudzirwa uye zvingasarudzwakutora mvumo yemashoko.
Imekudziro yeKunyorwa kweZviviso Zvokutumira
Kutariswa kwekutumira kunogona kuiswawo kuburikidza nekuwedzera kana JSON-LD kana microdatakusvika ku HTML email template sezvakaratidzwa mumuenzaniso uri pasi apa:
Muenzaniso unongoratidzira chete zvinhu zvinodikanwa, asi kusanganisira urongwa hweEmailKuwedzera, zvakawanda zvezvimwe zvinhu zvinogona kuwedzerwa kuti uwedzere ruzivo rwomutengesi. Izvi zvinosanganisira kutevera URL uye nhamba yekutevera yeachitsanangura kodhi yekutevera yekutakura uye nekugadzira purogiramu yekodhimbisi muGmail kana Google box.
Ndeupi Vatengi Vachaona Mamwe Mashoko Akawedzerwa?
Vatengesi ivavo paGoogle mubhokisi rebhokisi vachakohwa zvakanakisisa Email Markup intervention.Sezvo Gmail inoshandiswa nevanhu vanopfuura 1 bhiriyoni, kuvandudza mharidzo paGmail ine simba guru revateereri.
Vanyoresa vanotumira chete vanogona kunakidzwa neEmail Markup. Google inoda zvinotevera kuti zvinyorese munhu anoshandisa:
Mharidzo yekuvhenekera uchishandisa ma Domain Keys Kuzivikanwa Mail kana Sender Policy Framework
Error free email Markup
Kupopotera kwakafanana kweSpam kunofanira kunge kwakadzika
Nhoroondo yekutumira mazana emailisi pazuva pazuva emajeri eGmail
Mharidzo dzose dzinofanira kutumirwa kubva kune imwe yero ye email
Unofanira kusangana nemitemo yakarongwa neGmail's Bulk Sender
Muteresi ane ruzivo anowanzova mutengi anofara. Kutenga paIndaneti kunotarisirakukurukurirana nevatengesi kana chigadzirwa chinorayirwa uye kutumirwa. Ruzhinji rwevatengesi vanowanzotumira chisimbiso chakakwana uyedelivery delivery alerts emails. Kunyange zvakadaro, munyaya dzekambani dzakakura kana dzakasvibirira, kuwedzera huwandu hwenheyo dzakagadzirirwakuburitsa kunogona kunge kuri nani kune aya emaily kune vamwe vatengi.